Auto CAD ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ > Sticky---------ဖတ်ပေးပါ.. > AutoCAD > Auto CAD ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
View Full Version : Auto CAD ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
ကျနော့်မှာရှိတဲ့ Auto CAD စာအုပ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ....ကိုယ်တိုင်တော့ နားမလည်ပါဘူး.. ;D
တကယ်လေ့လာသူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ပါ....ရှိပြီးသားစာအုပ်နဲ့ ထပ်နေမှာစိုးလို့ print screen ရိုက်ပြီးပြထားပါတယ်.. :)
Here u can get acad pdf file of ur advanced cad tech.
AutoCAD 2008 စာအုပ်ပါ။
၃၇၁ မျက်နှာ။14.5 မက်။
စကားဝှက်တောင်းခဲ့ရင် ထုံးစံအတိုင်းပဲနော.. 8)
2008 AUTOCAD ရဲ့ RAR password ဘယ်လိုဖြည်ရသလဲ ရှင်းပြပေးပါဦး
စကားဝှက်တောင်းရင် www.myanmarengineer.org ကို ရိုက်ထည့်ပေးပါခင်ဗျာ...
သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်လို့ ထုံးစံအတိုင်းပဲလို့ ရေးထားလိုက်တာ..
i can&#039;t download autocad 2008.rar......occurs error
so give me another link...
ဒေါင်းလို့လည်းမရဘူးဗျာ။ Error 404 တဲ့။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာ။
filesize - 14.79 MB
password - www.myanmarengineer.org
password --&gt; www.myanmarengineer.org
AutoCAD 2009 Basic and LT
filesize - 6.33 MB
ဒီစာအုပ်တွေကို တစ်အုပ်မှ ဒေါင်းလို့မရဘူး
ကျွန်တော်တစ်ခု အကြံပေးချင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြား learning books တွေအတွက်တော. ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံအတွက်တော. မဝယ်နိုင်လို.၊ဝယ်ချင်လဲဝယ်ဖို.မလွယ်တော. sharing အတွက်မပြောလိုပါဘူး။ဒါပေမယ်. မြန်မာစာအုပ်တွေအတွက်တော. သက်ဆိုင်၇ာ author တွေကိုအနည်းဆုံးတော. ခွင်.တောင်းသင်.ပါတယ်။ဥပမာ ဆ၇ာ Robert..၇ဲ.စာအုပ်ဆိုအ၇မ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြား Autocad mastering စာအုပ်တွေတောင် မမှီပါဘူး။ငွေကြေးအနေနဲ. ၅ooo ကျော်ပဲရှိ ပါတယ်။ကျွန်တော်တို. Forum အတွက်ပါ။ဖြစ်နိုင်၇င် ကိုယ်.နိုင်ငံ၇ဲ. copyright ကို Myanmarengineer forum အနေနဲ. ထိမ်းသိမ်းပေးစေချင်ပါတယ်။Sharing အတွက် selfstudy လုပ်ကြပြီး ပြန် share လုပ်လုပ် learning လုပ်၇င် အကောင်းဆုံးပါ။Admin လူကြီးတွေအနေနဲ.လဲစဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာအမှားပါ၇င် နားလည်ပေးကြပါ။
ခွင့်တောင်းသင့်တယ် ဆိုတာတော့ သဘောတူတယ်ဗျ ... ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက မူရင်းစာရေးဆရာကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ဖို့ဆိုတာထားဦး ...။
ဒီစာအုပ်ကို pdf format ဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်တယ်၊ အခုတင်ပေးတဲ့လူတွေကလည်း ဘယ်ဖိုရမ်ကရလာတယ်၊ pdf စပြောင်းပေးတဲ့သူကရော ဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့၊မရှိခဲ့ ဆိုတာတွေက သိရခက်တယ်နော ...
မူရင်းစာရေးဆရာ ကလည်း သူ့စာအုပ်ကို ဘယ်သူscan စဖတ်ပြီး၊ ဘယ်သူက ဘယ်ဖိုရမ်မှာစတင်တယ် ဆိုတာကိုပဲပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တယ် ...
ဒါက ဖိုရမ် လေဗျာ၊ အသင်းဝင်ဖြစ်တာနဲ့ အချင်းချင်း အခမဲ့ ဖလှယ်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာမျိုးကိုး၊ (ဘယ်သူမှ ဒီစာအုပ်တွေကို ပိုက်ဆံနဲ့ပြန်ရောင်းမစားကြပါဘူး)
နိုင်ငံခြား e-books အဖွဲ့အစည်းတွေတောင် ဒီကိစ္စကိုမရှင်းနိုင်ကြဘူးဗျာ ...။
ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို ဆန့်ကျင်ပြီးပြောတာတော့ မဟုတ်ဘူးနော် ... ဖိုရမ်မှာတာဝန်ရှိတာထက် ... ဖိုရမ်ကိုယ်တိုင်က တာဝန်ခံဖို့မစွမ်းနိုင်တဲ့အချက်တွေကို ပြောပြတာပါ ...။
copy-right ကိုကျွန်တော်လည်းလေးစားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားကိုရောက်နေပြီး ကိုယ့်မြန်မာစာနဲ့ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ငတ်မွတ်နေတဲ့ member တွေအတွက်တော့ author ကိုယ်တိုင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးမယ်ထင်ပါတယ် ...။
နိုင်ငံတွင်းမှာတော့ ၀ယ်လို့ရတယ်လေဗျာ ...။ စာရွက်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ထားတာကို မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်ဖတ်လို့ရတယ် ...။ ဒီမှာတော့ computer screen ကပဲ မျက်လုံးအထိခိုက်ခံပြီးဖတ်နေကြရတာပါ ...။
Michael Scofield ပြောတာတွေ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တ်ာပြောချင်တာက myanmarengineer forum ဆိုတာ Ebooks forum တော.မဟုတ်ဘူးလို.ထင်ပါတယ်။Engineer ပညာ၇ပ်တွေကို ဖလှည်ကြ...ဝေမျှကြတာလို. နားလည်ပါတယ်။Michael ပြောသလို pdf scan ဘယ်သူဖတ်သလဲဆိုတာထက် ဘယ်နေ၇ာမှာတင်သလဲဆိုတာ ကို ဆိုတဲ. sharing ကိုပဲကျွန်တော်အကြံပြုတာပါ။ဘာလို.လဲဆိုတော. forum ၇ဲ. ဘာသာ၇ပ်အတော်များများမှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ.အကြုံရှိတဲ.သူတွေတော်တော်များများ ကိုယ်ပိုင် knowledge sharing တွေပေးနေတာကြည်.ပြီး အားတက်လာလို.ပါ။တိုက်ရိုက် မေးကြ ဖြေကြနဲ. ...ကြည်.ပြီးကြည်နုးမိ..လို.ပါ။autocad...3ds max...တွေအများကြီး ဆွေးနွေးကြတဲ. cadtutor လို forum ကြီးတွေမှာ members တွေ admin တွေ sharing လုပ်ကြ ဆွေးနွေးကြနဲ. copyright မပါပဲ တစ်ချို. member တွေက စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး သိတဲ.အသိတွေကို ပြန်ပြီး sharing ပြန်လုပ်ကြပါတယ်။တစ်ကယ်လို. စာအုပ်ကောင်းတွေဆိုလဲ ညွုန်းကြ..ဝယ်ဖို.အခြေအနေမပေးဘူးဆို၇င်လဲ..personal message တွေ Email တွေနဲ.ပဲဖလှယ်ပြီး..ထိမ်းသိမ်းကြလို.ပါ။ကျွန်တော်တို. forum ကိုလဲ အဲဒီလိုဖြစ်စေချင်လို.ပါ။အခုလိုဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ကျမလည်း ကော်ပီရိုက်ကို လေးစားပါတယ်။ ကျမ အနေနဲ့ဆိုရင် EBook တွေနဲ့ စာမဖတ်ပါဘူး။ ၀ယ်လို့ရတဲ့ စာအုပ်မှတ်သမျှ ကျမ၀ယ်ပါတယ်။ ၀ယ်ဖို့ အရမ်းဈေးကြီးတဲ့ စာအုပ်တွေကိုမှ ကျမprint ထုတ်ပီးဖတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမစိတ်ထင် မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေမှာ EBook ဖတ်တာနည်းအုံးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို ဖိုရမ်တွေမှာ တင်ထားတာကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်တာလဲ ပြည်ပကလူတွေပဲ များမှာပါ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ ဆရာတွေကိုတော့ လေးစားလျှက်ပါ.
ဟာ ....... ရှေ့မှာတရုတ်ပြည်တပြည်လုံးရှိတယ်။ သူတို့ဒီလိုဖြစ်အောင် ဒါမျိုး forum တွေကပဲလုပ်သွားတာပါဗျာ . ကျနော်တို့က ခိုးကိုခိုးရမယ် ။ ပြီးရင် အချင်းချင်းကို ဖလှယ်ရမယ်။ စာအုပ်ထုတ်သူတွေလည်း လုပ်စားပြီးပြီလေတော်တော်လေး။ ပြီးတော့ အင်တာနက်သုံးပြီး ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကလည်း လူနည်းစုပါဗျာ. ဘာမှ copy right ပြောမနေနဲ့ . ပြောချင်တဲ့သူဆိုလည်း ကျနော်က .........။ တင်ပေးကျပါ ebook တွေ softwares တွေ
အခုလောလောဆယ်တော့ ဘာစာအုပ်မှ ဒေါင်းလို့မရပါခင်ဗျ မြန်မာပြည်မှာ . ကျေးဇူးပြု၍ http://sites.google.com ကိုတင်ပြီး လင့်ခ် လေးပေးပါလားခင်ဗျာ. ရန်ကုန်မှာက Google Site ကဆိုရတယ်ဗျ. ကျေးဇူးပါနော်
သူငယ်ချင်းတို့ရေ...
PDF format မှ DWG format ပြောင်းလို့ ရ တဲ့converter လေးရှိ မယ်ဆို ရင် ဒေါင်းလို့ ရမယ့် လင့်လေးတင်ပေး စေချင်ပါတယ်. ဒေါင်းလို့တော်တော်များများ က trial version ဖြစ်နေပြီး copy လုပ်လို့ မရပဲ အစမ်းပြ ထားတာကို ပဲ တွေ့ ရပြီး သုံး လို့ မရဘူးဖြစ်နေ လို့ ပါ....
http://www.brothersoft.com/downloads/pdf2dwg.html ဒီ link ကဒေါင်းပါ။အခါ 20 ပြောင်းလို.၇ပါတယ်။full version တော.မတွေသေးပါဘူး။
အခါ 20 ပြည်.သွား၇င် unistaller software တစ်ခုခုနဲ.ဖြုတ်ပြီး registry cleaner run ပြီး ပြန် install လုပ် ပြန်သုံးကြည်.ပေါ.နော်။
ကျွန်တော် ဒေါင်းလို့ မရဘူးခင်ဗျ
ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော့်ရဲ့မေးလ်ထဲကိုပို့ ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
&lt;img src=&quot;http://api.ning.com/files/S3uEX3va0zSEfIQzdk2bP-*p1f6a7tj79k3mt-WHYji2X5GFR98TQLqhcuIosaaLmZ12J67***GL75kN9svOqBzXo566S0OS/autoCAD.JPG&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;496&quot; height=&quot;555&quot;/&gt;&lt;/p&gt;
Rapidshare ကနေရှာကြည့်လို့ တွေ့မိတာလေးပါ
&lt;img src=&quot;http://api.ning.com/files/yvsC7g3ojmr3LnnFmkkNpHGkBbZ28uTDGPTqPZZRA1cNTs57Nio1zGPdXITxWcjUsVtSGOVI7nEkN0fgnh0Z5IwVlmDawvzY/2lcwcbn.jpg.gif&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;110&quot;/&gt;&lt;/p&gt;
အပေါ်က လင့်က နောက် site တစ်ခုကို ညွှန်းနေတယ်ဗျ...
အဲလို အခြား ဖိုရမ်(သို့)site တစ်ခုခုက လင့်ကို ညွှန်းပေးတာမျိုးကျတော့ အဲဒီ site ကာယကံရှင်မသိဘဲ ဒီဖိုရမ်မှာ လာလင့်ထားတာမျိုးလက်မခံပါဘူး။
မူရင်း တင်ထားတဲ့သူသိရင်ဖြစ်စေ၊အဲဒီ site ကသူတစ်ယောက်ယောက်တွေ့လို့ ပြန်ဖြုတ်ချပေးဖို့ ပြောလာတဲ့အခါ မကောင်းပါဘူး။
အပေါ်က လင့်ကို ဖျက်ထားပြီ်းifle it က ပြန်တင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်ပြီး တင်ထားပေးတဲ့ ပုံနဲ့ စာအုပ်နဲ့ မကိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ.. AutoCAD LT2009 မဟုတ်ပါဘူး။AutoCAD LT2008 ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒါလေးပါ ပြင်ထားပေးလိုက်ပါတယ်...2009 ကို တင်ပေးရင်တော့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဗျာ.. :) :)
myanmarbook ning .com ထဲကပါ..
file hosting လုပ်ရတာအဆင်ပြေလို့ပါ..
Autocad release 12 ကနေ 2009 အထိ autocad command quick guide ပါ။...
Autocad command history ကို သေသေချာချာလေ့လာချင်သူများအတွက်
Autocad ရဲ့ programming ကို VBA နဲ့မှလေ့လာချင်သူများအတွက် ... :)
Learngin AutoCAD CD vol ( 1,2,3 ) By ချန်းချန်း ( Mg Mine )
Volume ( 1 )
part 1 - http://www.sendspace.com/file/aqzcyq
part2- http://www.sendspace.com/file/9jhi9l
part 1 - http://ifile.it/9qmla07/learning_acad_vol-1.part1.rar
part2- http://ifile.it/uh0ld9n/learning_acad_vol-1.part2.rar
Volume (2)
part 1 - http://www.sendspace.com/file/r1mxp1
part2- http://www.sendspace.com/file/pvkr8f
part 1 - http://ifile.it/vdjpeca/vol-2.part1.rar
part2- http://ifile.it/8uvht91/vol-2.part2.rar
part 1 - http://www.sendspace.com/file/jtegcm
part2- http://www.sendspace.com/file/7tbi9h
part 1 - http://ifile.it/8zbhak5/learning_acad_vol-3.part1.rar
part2- http://ifile.it/kl4h5yj/learning_acad_vol-3.part2.rar
:)ကဲလာပါပြီနော် autocad 2010 mastering ebook ပါ....rapidshare နဲ့ပါ...မြန်မာကနေ 65 mb upload လုပ်ဖို့မလွယ်လို့
အဆင်ပြေတဲ့သူများ download လုပ်ပြီးပြန်တင်ရင်ပို အဆင်ပြေပါမယ်...
Auto CAD Mechanical 2008
User&#039;s Guide Book
ကို erickse ရေ...အကုန်မရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကျနော်ဆီမှာ
http://ifile.it/gvdazwl ကရပါတယ် ။
Advanced AutoCAD tips and techniques စာအုပ်ပါ။
I can&#039;t download the file :( ...
MEF ရဲ့Download centre ကနေ ကျနော် ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်
ဆွဲရတာ နည်းနည်းသက်သာအောင် rar zip file နဲ့ တင်ထားပါတယ်
နောက်တစ်ကြိမ်မူရင်းပိုစ့်ကနေလည်း ကျန်လူများ ထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါဦး
DOWNLOAD LINK (http://ifile.it/x79r36c)
အွန်..ဒီစာအုပ်က software လေးပါပါမှ အဆင်ပြေမှာလေ.. :angry:
ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ဗျာ http://dc165.4shared.com/download/164460906/3ddb0cb/QuickTools17.rar?tsid=20091203-000945-6a3dfae3
ဆရာသိရင်တော့စိတ်ကောင်းပါ့မလားတော့မသိဘူး။ သူခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားထားတာကို ကျွန်တော်က အလားလိုက်ဝေပေးနေတော့ ဆရာများစိတ်ဆိုးမလားမသိဘူး။
မKPZ ကတော့ 2000-2010 version အတွက်လို့ပြောတယ် ဆရာများ improve လုပ်ထားလားမသိဘူး။ ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ version အဟောင်းဘဲရှိတယ်။
2000-2006 အတွက်ဘဲ သုံးလို့ရမယ်ထင်တယ်။
Software လေးပါ ပါမှ အဆင်ပြောမယ်ဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပီနော်
DOWNLOAD LINK (http://ifile.it/ugb0p4n/Quick%20tools%201.7%282010%29.rar)
Introduction to autocad 2006 2D &amp; 3D ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ဖြစ်နိူင်မရ် ဆိုရင် http://ifile.it website ကနေပြန်တင်ပေးပါလား ။
mediafire က ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ ပိတ်ထားလို့ပါ ။
ဖြစ်နိုင်ရင် mail ထဲကိုပို့ပေးပါလားခင်ဗျာ။ hipper88@gmail.com ပါ။ ကူညီကြပါနော်
AutoCAD 2005 (ဦးအောင်မြင့်)
AutoCAD 200 (ဦးခင်မောင်စိုး)
ဒီအောက်ကဟာလေးကတော့ AutoCAD 2008 2D And 3D Design စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်.......
အဆင်ပြေရင် ဒီပြင်ကနေ Upload လုပ်ပေးလို့ရမလား ကျွန်တော်က Ifile ကနေအဆင်ပြေဘူး :&#039;( ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီလင့်လေးကတော့ ပထမဆုံး အော်တိုကဒ် စတင်လေ့လာသူများ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ ရပါတယ် အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ ဝေငှာလိုက်တာပါ
စာအုပ်တွေကို တစ်အုပ်မှ ဒေါင်းလုပ်ဒ် လုပ်လို.မရပါဘူးခင်ဗျာ ကျေးဇူးပြုပြီး ထပ်တင်ပေးပါခင်ဗျား
ဘယ်လို ဒေါင်းလို့ မရတာလဲ မသိဘူး .. လင့်ခ်တွေက အလုပ်လုပ်ပါသေးတယ် ..
နောက်ပြီး လင့်ခ်က တစ်ခုတည်းလဲ မဟုတ်ဘူး.. တချို့စာအုပ်တွေဆို လင့်ခ်ပေါင်းစုံကနေ တင်ထားပေးတာ တွေ့ရပါတယ်..
အဲဒီလင့်ခ်တွေကို ဒေါင်းမရဘူးဆိုရင် Rapid , Mega , Hotfile တွေနဲ့ တင်ပေးမှပဲ ရတော့မယ် ..
သေချာလေး ပြန်ဒေါင်းကြည့်ပါဦး ..တကယ်လို့ လုံးဝ ဒေါင်းလို့ မရဘူးဆိုရင်လဲ ပြောပါ ...
အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးပါ့မယ် ....
03-06-2010, 07:02 AM
ုI can&#039;t download the file :( ...
kk2koko ရေ.. ကျနော် တင်ပေးထားတာက MEF ရဲ့ဒေါင်းလုတ်စင်တာကနေပါ..Ifile ကနေ မဟုတ်ပါဘူး...
link တွေ ကောင်းပါတယ်.. ကြိုးစားပြီး ဒေါင်းလုတ်ဆွဲကြည့်ပါဦး... ကျန်တဲ့ဆိုဒ်တွေကနေဆိုရင် Expire ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ ပါ..
[b] ဒီနေရာကယူပါ (http://www.myanmarengineer.org/index.php?ind=downloads&amp;op=entry_view&amp;iden=201)
စာအုပ်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်မရေ။ ဆရာရောဘတ်ရဲ့စာအုပ်တွေက ရှင်းလဲရှင်းတယ်။ သင်ပေးတာလည်းထိထိမိမိလေးဗျ။
ဘယ်သူမဆို အလွယ်တစ်ကူလေ့လာနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားတာ။ နောက်လည်း ဆရာရောဘတ်ရဲ့ စာအုပ်အသစ်ထွက်တာရှိရင် တင်ပေးပါဦးနော်။
AutoCAD ပညာကို မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာလိုသူ များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Learning AutoCAD 2010 Vol 1 နှင့်2ကို ပညာဒါန Ebook အဖြစ် ယနေ့ စတင်ဖြန့်ဝေ
Mutdfan.com or MMdailynews.com ကို စတင် တည်ထောင် ပေးခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့ရှိ Workgroup IT Solution &amp; Training Center မှ AutoCAD ပညာကို မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာလိုသူ များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Learning AutoCAD 2010 Vol 1 နှင့်2ကို ပညာဒါန Ebook အဖြစ် ယနေ့ စတင်ဖြန့်ဝေ ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ Workgroup အနေဖြင့် ရုရှားနိုင်ငံ Moscow State University Of Railway Engineering ကျောင်းတွင် Master of Engineering in Science and Production Engineering ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူ မတ်ဖန် အယ်ဒီတာ ရှမ်းလေး (မိုးနှဲ) ခေါ် ကိုအောင်ဇော်လတ် နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဤစာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်တွင် ပါရှိသော အမှာစာများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပြီး စာအုပ်ကို အခမဲ့ မည်သူမဆို ရယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အခမဲ့ အနေဖြင့် မည်သည့်နေရာမှ မဆို ဆက်လက် ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါး အပ်ပါသည်။
“Workgroup” AutoCAD &amp; 3ds Max Job Training Center မှ အမှာစာ
မန်မာပြည်တွင် AutoCAD ပညာနှင့် ပတ်သက်ပြီး စာအုပ်စာပေ ထွက်ရှိမှု အလွန်နည်းနေသေးသဖြင့် သင်တန်းသို့ မသွားနိုင်သူများ နှင့် ကိုယ်တိုင် လေ့လာလိုသူများ အနေဖြင့် အခက်တွေ့ရလေ့ ရှိပါသည်။ စာအုပ်တစ်အုပ် ၀ယ်ယူပြီး နေရာတိုင်း ယူသွားဖို့ မဖြစ်နိုင်သူများအတွက် လည်းကောင်း၊ စာအုပ်ဈေးနှုန်း ပမာဏကို စဉ်းစား ရသူများ အတွက် လည်းကောင်း မည်သည့်နေရာဒေသ ရောက်နေသည် ဖြစ်စေ Online မှ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ပေးပို့လိုသူများ အတွက်လည်းကောင်း အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေစေရန် eBook အနေဖြင့် အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အတတ်ပညာ တစ်ခုကို သင်ယူလိုသော ဆန္ဒပြင်းပြပါလျက်နှင့် လိုအပ်သော အထောက်အကူ ပစ္စည်းများကြောင့် အားမတန် မာန်လျော့ရသော အလားအလာကောင်းသည့် ပညာရှင် အလောင်းအလျာများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Workgroup AutoCAD &amp; 3ds Max Job Training Center မှ “ပညာလိုသူ ပညာရစေ” ဟူသော စေတနာဖြင့် အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
အခြေခံမှ အဆင့်မြင့် AutoCAD ပညာအထိ လေ့လာလိုသူများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သည့် ဤစာအုပ်လေးမှာ AutoCAD Software ကို တီထွင်သည့် Autodesk ကုမ္မဏီက AutoCAD 2010 ကို သင်တန်းကျောင်း လက်စွဲအနေဖြင့် အသုံးပြုရန်အတွက်သာ Exam Guide vol- 1 နှင့် vol-2 ဟု စာအုပ်နှစ်အုပ် ထုတ်ဝေခဲ့သဖြင့်လည်း ရှားပါးလှသည့် စာအုပ်လေး ဖြစ်ပါသည်။ မူလ စာအုပ်အတိုင်း eBook ၌ အပိုင်း ၂ ပိုင်း ပါဝင်လာမည် ဖြစ်သလို ပူးတွဲပါလာသည့် Workfiles များနှင့် ပေါင်းစပ် လေ့လာပါမှ ပိုမိုပြည့်စုံသည့် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ပြီး Autodesk မှ ကြီးမှူး စစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲသာမက ICDL CAD စာမေးပွဲ များကိုပါ ၀င်ရောက်ဖြေဆို အောင်မြင်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတတ်ပညာ တစ်ခုအဖြစ် AutoCAD နှင့် ဆက်စပ်သော နယ်ပယ်တွင် တက်စုံရွက်စုံဖြင့် မိမိတို့၏ အနာဂတ်ကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီး တည်ဆောက်နိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြု ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ရပါသည်။
ဤစာမူလေးအတွက် ရရှိခဲ့သော စာမူခ များကို အနာကြီးရောဂါ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဖေါင်ဒေးရှင်း Leprosyhelp.org သို့ လှူဒါန်းခဲ့သည့် မကြာမီ ဒေါက်တာဘွဲ့ပါ ရရှိလာတော့မည့် စာရေးဆရာ ကိုအောင်ဇော်လတ်၏ စေတနာ မေတ္တာများအတွက်လည်း ကြည်နူးမှု အပြည့်ဖြင့် သာဓုသုံးကြိမ် ခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်။
“Workgroup” AutoCAD &amp; 3ds Max Job Training Center
(International Computer Driving Licence Approved Test Center )
Rm- 403, Excel Tower Apartment, Gabar Aye Pagoda Rd,
Bahan Township, Yangon,Myanmar.
Ph: 951 559377 Ext: 6413. Email – infor@Workgroupweb.com
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး လူသိများပြီး၊ Engineering နယ်ပယ်တွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာသည့် AutoCAD ဆိုသော CAD (Computer Aided Design or Computer Aided Drafting) Software ကို 2D&amp; 3D နဲ့ Drafting များအတွက် အမေရိကန် အခြေစိုက် Company ဖြစ်သော Autodesk Company က 82 နှောင်းပိုင်းတွင် အထူးစီမံ ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ AutoCAD Software သည် Personal Computer တွင် Run ပြီး ပထမဆုံး အသုံးပြုခဲ့သော CAD system ဖြစ်ပါသည်။
အစောပိုင်းကာလက AutoCAD System တွင် Lines, Polylines, Circles, Arcs နဲ့ Text စသည် Objects များသာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ထို Objects များဖြင့်သာ Designs များဖန်တီးခဲ့ကြရ ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် AutoCAD system ကို တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် Functions များဖြည့်စွက်ခဲ့ကြပြီး၊ Designs များအတွက် အဆင့်မြင့် System ဖြစ်သော C++ API system ဖြင့် ပေါင်းစပ်တီထွင်ထားသည့် Solid modeling နဲ့ 3D tools ကိုဖြည့်စွက် နိုင်ခဲ့ခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြည့်စွက်မှု့ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ Versions များမြှင့်တင် ထုတ်လာရင်း၊ ယခု AutoCAD software 2010 version ကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီ ပေးနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထို Software ကိုဖြန့်ချီလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း Autodesk Company က AutoCAD Software 2010 ကို လေ့လာသူများအတွက် အထောက်အကူပြုစေရန် Learning AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010 Autodesk Official Training Guide ဆိုသော နာမည်ဖြင့် Guide Book ကိုပါ ရေးသား ထုတ်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။ Autodesk Company ကကြီးမှူး ဖွင့်လှစ်ထားသော Authorized Training Center (ATC®) နှင့် အခြားသော Training Classroom များ၌လည်း ဤစာအုပ်တွင် ပါဝင်သော Courses များအတိုင်း သင်ကြားပေး နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ AutoCAD ပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလိုသူများ၊ တိုင်းတစ်ပါးသို့ AutoCAD ပညာရပ်ဖြင့် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများနှင့် AutoCAD ပညာရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားပြီး သင်တန်းတက်ရန် အခက်ခဲ ရှိသောကျောင်းသားများ အတွက် အထောက်အကူ ပြုစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး စာရေးသူ အနေဖြင့် မူရင်းစာအုပ်ကို အနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန် ရေးသားပြုစုပေး လိုက်ပါ သည်။
ဤစာအုပ် ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ပံ့ပိုးကူညီ ပေးခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့၊ “Workgroup” AutoCAD &amp; 3ds Max Job Training Center / ( Mutdfan.com ၏ အယ်ဒီတာချုပ်) ဦးဇော်လွင်ဝင်း နှင့် ဇနီး ဒေါ်ဥမ္မာအောင်၊ စာရေးသူကို AutoCAD ဆိုသော ပညာရပ်ဖြင့် စတင်မိတ်ဆက် ပေးခဲ့သည့် စာရေးသူ၏ လက်ဦးဆရာဖြစ်သော ကိုကြီး ဆန်းလင်းထွန်း၊ AutoCAD နှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည် သင်ကြားပြသပေးသော Moscow State University of Rainway Engineering တက္ကသိုလ်၊ CAD Transportation Structures and Construction ဌာနမှ ကထိက C.H.Hazarenko နှင့် ကျေးဇူးရှင် မိဘနှစ်ပါး တို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားရင်း၊ လေ့လာသူများ အနေဖြင့် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို အရောက် လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။
Master of Engineering in Science and Production Engineering
Quick Tools for AutoCAD 2000 -2010 ကိုဒေါင်းလို့မရဘူးရှင့်။ ပြန်တင်ပေးပါနော်။ ကျွန်မ အဲဒါကို အရေးတကြီးလိုနေလို့ပါ။ ခုအလုပ်က autoCAD ကိုအရမ်းသုံးနေရပါတယ်ရှင့်။
ကျွန်တော်လည်း Auto CAD ဆိုင်ရာ စာအုပ်များကုို လုိုအပ်နေတယ်
ချမ်းချမ်းရဲ့အော်တိုကတ်ဘီဒီယိုတွေ လင့် အယ်ရာတွေဖြစ်နေတယ်... vol2နဲ့3 ပေါ့....
Auto-Cad စာအုပ်တွေ Download ဆွဲတာ No Such File ဖြစ်နေပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဘယ် link နဲ့ Down လိ်ု့ရပါသလဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် Mediafire နဲ့တင်ပေးပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
AutoCAD 2010 (ကိုအောင်ဇော်လတ်)
ဦး ပါပါကြီး ကျောတာ မီးမီး တိတ် နားလည်ဝူး ဘာတွေကျောတာရဲဟင်.... :confused:
Can't download it. When i tried to download it, it show no such file. Kindly please upload it again.
the link said no file
please up load file
ကျေးဇူးပြုပြီးပြန်တင်ပေးကြပါဦး ဆရာတို့ ရေ
autocad ဆိုင်ရာတွေတင်ပေးတဲ့ ကိုဖိုးတာနဲ့ veronica ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ......
ကို KPZ ရေ စာအုပ်တွေက ဒေါင်းလို့မရဖြစ်နေလို့ ကူညီပါအုံးနော်....
GTU ဆိုဒ်ကတွ့တာလေး ကျတော်ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
AutoCAD 2011 & Setting Changing ( Can Play in Window Media Player )
Mediafire rar 2
Mediafire rar 3
AutoCAD 11 ( line , circle , erase , copy )
AutoCAD Installation 2009 ( but same with 2010,2011 too .. )
video file အနေနဲ့ တင်ပေးထားလို့ နည်းနည်းတော့ file size ကြီးသွားပါတယ် ... book လုပ်လို့ရပေမယ့် ..
နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာ ... video file နဲ့ ပြမှ အဆင်ပြေမှာမို့ပါ ... ခုကပထမဆုံးမို့လို့ နည်းနည်းဝါးပေမယ့် .
.. install လုပ်နိုင်အောင် .. စာတန်းတွေပါ ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် .. လုံးဝအဆင်ပြေတာ အာမခံပါတယ် .....
အခုဖိုင်တွေကို မဒေါင်းခင် GOM Player ကိုအရင်ဒေါင်းရပါမယ် .. ဒါမှ ဖွင့်လို့ရမှာမို့ပါ .. အောက်မှာ Gom ကို အရင် ဒေါင်းသွားလိုက်ပါဦး ..........
Mediafire Link For Gom Player
AutoCAD Installation ကိုတော့ ဒီမှာဒေါင်းသွားပါ ...
Mediafire link For AutoCAD Installation
AutoCAD Settings များအားပြင်ခြင်း .....
အခု Video မှာတော့ .. ဘာplayer မှမလိုပါဘူး . wmv ဖိုင်နဲ့လုပ်ထားပါတယ်.. ဒါပေမယ့် .. အရင် Installation ကလို
သီချင်းတွေလည်းမပါတော့ပါဘူး .. အသံတိတ်သင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် ... နောက်လည်းဒီတိုင်းပဲသင်သွားမှာပါ ...
အခုဆိုရင် ဒီ Video file ကစလို့ သင်စိတ်ချမ်းသာရတော့မှာပါ ... Resolution ကတော့ ရှယ် .....
AutoCAD ရဲ့ Settings တွေတမင်တကာလုပ်ပြထားတာက .. ဒီတိုင်းပုံဆွဲမယ်မပြင်ဘူးဆိုရင် .. အခက်တွေ့စေလို့ပါ ..
အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ .. လင့်နှစ်ခုနဲ့ပေးထားပါတယ် .... ဆိုဒ်ထဲမှာလည်းတင်ထားပါတယ် .. ရတဲ့ဘက်က လှည့်ဆွဲကြပါ .... လို့ ..
Mediafire Links for AutoCAD Settings
စာအုပ်လေး လိုချင်ပါတယ်.. ရှေ့မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်က ဒေါင်းလို့ မရလို့ပါ.. ကျေးဇူးပြုပြီး mediafire or Sites.google.com ကို သုံးပေးပါလား ဟင်.. စင်္ကာပူမှာနေတယ်ဆိုပြီး ကော်နက်ရှင် ကောင်းတိုင်း သိပ်ပြီး ပညာ မပြကြပါနဲ့.. :(
ရှိသမျှ စာအုပ်အားလုံး မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒေါင်းလို့ မရပါ.. :D
Free Download လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်.. ပိုက်ဆံ ပေးရမှာ ဖြစ်နေလို့ free ရတဲ့ နေရာကနေ ပြန်တင်ပေးပါလားရှင်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ကျနော်လဲ မြန်မာပြည်မှာနေတာပါ ကျနော် ဒေါင်းလို့ရတဲ့ လင့် ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
myo lwin 8299
AutoCAD 3D မြန်မာလိုရေတဲ့စာအုပ်လေးများရှိရင် ပေးကြပါ လေ့လာချင်လို့ ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Links တွေ က ဒေါင်း လို့အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေပါတယ် ... ပြန်ကြည့်ပြီး သေချာ ပြန်တင်ပေးကြပါအုံးခင်ဗျာ
AutoCAD 2013 စာအုပ်လေးများရရင် လိုချင်ပါတယ်။ တင်ပေမယ်ဆိုရင်တော့ Thank You ပါဗျာ။
ကျွန်တော် AutoLISP နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာလို စာအုပ်လေးလိုချင်လို့ပါ။
AutoCad 2016 စာအုပ်​လိုချင်​လို့ပါ မြန်​မာလိုဖြစ်ဖြစ်​ Englishလိုဖြစ်​ဖြစ်​ အဆင်​​ပြေပါတယ်​ File sizeများရင်​​တော့ ချုံ့ပြီးတင်​​ပေး​စေချင်​ပါတယ်​ MPT လိုင်းနဲ့ downloadလုပ်​ရမှာမို့လို့ပါ